Nwam, Bill, na enyi ya, Jared, tinye ọnụ ọgụgụ a ọnụ n'izu a… "We Goin to da Supa Bowl!" Bill bụ guitar na mix, Jared bụ olu dị egwu, na Katie na-abụ obere nkwado abụ.
Nke a bụ maka ndị enyi m na Colts, Pat na AJ. Nwa m nwoke dị mma na ihe a! Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ịnwere ike ibudata ya ebe a:
Nnwere onwe nke ndị nta akụkọ
Feb 1, 2007 n’elekere 9:57 nke abali
Dị jụụ! Ọ bụrụ na amaghị m nke ọma, m ga-eche na nke ahụ bụ Satch 🙂